OwoZalo nesifiso sokuyolingisa phesheya
UNOTHANDO Ngcobo ungaphika ukuthi nguye lo owuHlelo kuZalo Isithombe:FACEBOOK
UKULINGISA emdlalweni owuchungechunge ohamba phambili kuleli ngababukeli, Uzalo, kwenza intokazi edabuka e-Unit 6, eHammarsdale, uNothando Ngcobo, ilangazelele ukuyoveza ikhono layo phesheya kwezilwandle.
UNothando (26) uthi indawo ayilingisayo kaHlelo nesematheni kulezi zinsuku iyona emethule ngokusemthethweni endimeni yezokulingisa. Yize longqeqe eqale ukulingisa emafilimini amafishane, akhonjiswa kuMzansi Bioskop ngo-2014 futhi waze waqokwa emunxeni weBest Supporting Actress kumaSimon Mabhunu Sabela Awards ngo2017, ngokulingisa efilimini emfishane ethi The Swallow Falls On, kodwa indawo kaHlelo imakhele ugazi kubantu abaningi.
"Ngangazi ngesikhathi ngingena kuyo ukuthi izosusa ukukhuluma. Yingoba uHlelo wumuntu ongenakusasa, ongalawuleki futhi ongazi ukuthi ufunani empilweni." Uthe uzibone ngale ndawo ukuthi usekhulile kulo mkhakha yize ebeseyikluma.
"Ukudlala indawo ekhuluma ngempilo eqhelelene kakhulu nawe akusiyo neze into elula." Uthe uke walingisa indawo kaPrudence kwiLingashoni kodwa beyihluke kakhulu kwekaHlelo. "UPrudence intombazane engenayo impilo enezigemegeme njengekaHlelo. Ukhulele emndenini ohlelekile kanti uHlelo uhlukumezeke kakhulu esakhula. Wahlala nasemigwaqweni ngoba ubengafunwa ngunina. Ucabanga nje ukuthi akanakusasa."
Eqhuba uthe yena noHlelo bahluke kakhulu kodwa bafana kuphela ngokuhlakanipha ngoba uHlelo ukhaliphe ngendlela yakhe. UNothando uthe ukhule enesifiso sokungena emkhakheni wokulingisa kodwa benomndeni wakhe bathatha isinqumo sokuba aqale abe neziqu zomunye umsebenzi kuqala. Abalingisi akhule ebukela kubo ubale uLinda Sokhulu, Tshedi Motshega kanti phesheya ubale uWill Smith noHalle Berry.
"Sasenzela ukuthi uma kungasahambi kahle ekulingiseni ngibuyele komunye umsebenzi engiwufundele. Ngithe uma ngiphothula uGrade 12 eKloof High ngo2013 ngayokwenza izifundo zeStrategic Marketing and Communications e-University of Johannesburg. Emuva kokuphothula leziqu ngabe sengiyokwenza izifundo zePart-Time in Acting eMarket Theatre eGoli."
Uke wasebenza njengomhleli wemicimbi eSasol. Uthe usekulungele ukudlala emafilimini amakhulu futhi aphathe uhlelo nasemicimbini ehlukahlukene. UNothando uyingane yesibili futhi uyindodakazi yokuqala ebantwaneni bakaPrincess Ngcobo.